GUODA Inc inogara iri munzira
Kuti tivandudze kugona kwedu kugona, GUODA inotora chikamu pakuratidzira kwakasiyana zvese mudzimba uye mukati. Chinangwa chikuru cheGUODA Inc.chiri kuenda pasirese. Nekudaro, isu tanga tichishingairira kutora chikamu pamitambo yepasi rose mumakore akati wandei apfuura. Tichivimba kuti mabhasikoro edu akanakisa aigona kuonekwa, pasami ...
Kugadzirira kweCanton Fair
Vhiki rapfuura Guoda Tianjin Inc.Marketing department rakagadzirira iyo Yekutanga online Export Fair's ruzivo.Takaenda kufekitori yedu kutora zvigadzirwa zvigadzirwa mavhidhiyo.Panguva iyi, isu takanyora zvigadzirwa zvigadzirwa kugadzirwa. izvo zvakatora ...
Vhiki rapfuura Guoda Tianjin Inc.Marketing department rakagadzirira iyo Yekutanga online Export Fair's ruzivo.Takaenda kufekitori yedu kutora zvigadzirwa zvigadzirwa mavhidhiyo.Panguva iyi, isu takanyora zvigadzirwa zvigadzirwa kugadzirwa. izvo zvakare ...
Ongorora Musika uye Innovation GUODA Inc Inogara iri munzira
Kuti tivandudze kugona kwedu kugona, GUODA inotora chikamu pakuratidzira kwakasiyana zvese mudzimba uye mukati. Chinangwa chikuru cheGUODA Inc.chiri kuenda pasirese. Nekudaro, isu tanga tichishingairira kutora chikamu pamitambo yepasi rose mumakore akati wandei apfuura. Tichivimba kuti mabhasikoro edu akanaka angave se ...
GUODA inotora mutoro kune ese vatengi 'zvigadzirwa zvinoda
Munguva pfupi yapfuura, GUODA mabhasikoro evana ari mukutengesa kupisa kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia. Vatengi vazhinji vanosarudza yakakura hombe yezvigadzirwa zvedu, senge yevana 'bhasikoro bhasikoro, yevana' yemakomo bhasikoro uye yevana 'bhasikoro ane ekudzidzisa mavhiri, kunyanya evana' tricycle. Mazhinji evatengi vedu, ivo vanosarudza sarudza kusiyana ...
Welcome to GUODA (Tianjin) Science and Technology Development Incorporated Company! Kubva 2007, isu takazvipira kuvhura fekitori yehunyanzvi yekugadzirwa kwemabhasikoro emagetsi. Muna 2014, GUODA yakagadzwa zviri pamutemo uye iri paTianjin, iyo yakakura kwazvo ...
Nhau Dzakanaka —— Zvikamu zveBhasikoro Zviri Kutengeswa
Isu tinovhura webhu kuti tiratidze kambani yedu uye tinokuunzira zvigadzirwa zvedu, bhasikoro, bhasikoro remagetsi uye tricycle, mudhudhudhu wemagetsi uye sikuta, vana bhasikoro uye zvinhu zvevana. Muna 2020, misika yebhasikoro iri kuwedzera. Zvinoenderana nezvinodiwa pamusika, isu takatangawo kutengesa zvikamu. Ipa Yakagadzirirwa ...
Ndikuratidze uchitenderedza chigadzirwa chedu -—E bhasikoro
Sekambani kune chigadzirwa e-bhasikoro, kuve nehunhu kudzora kwakakosha kwazvo. Kutanga, vashandi vedu vanoongorora asina kudzikiswa emabhasiketi emagetsi emagetsi. Wobva warega wakasungirirwa zvakanaka bhasikoro remagetsi bhasiketi furuji yakamisikidzwa zvine mutsindo kune chinotenderera bhesheni pabasa rebhenji ine girizi rakaiswa kune yayo ese majoini. ...